ကုန်ကြမ်း RAD140 (Testolone) အမှုန့် (1182367-47-0) hplc≥98% | AASraw
RAD140 (Testolone) အမှုန့်
/ ထုတ်ကုန်များ / SARMS / RAD140 (Testolone) အမှုန့်
5.00 ထဲက5အခြေခံ2ဖောက်သည် ratings
SKU: 1182367-47-0. အမျိုးအစား: SARMS
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ RAD140 ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (Testolone) အမှုန့် (1182367-47-0) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
RAD140 (Testolone) အမှုန့်ကိုဗီဒီယို
ကုန်ကြမ်း RAD140 (Testolone) အမှုန့် အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: RAD140 (Testolone) အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 447.57 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
စတီရွိုက်သံသရာအတွက်ကုန်ကြမ်း RAD140 (Testolone) အမှုန့်သုံးစွဲမှုကို
ကုန်ကြမ်း RAD140 (Testolone) အမှုန့်အမည်များ
RAD140 အမှုန့်ကိုလည်း Testolone အမှုန့် (CAS 1182367-47-0) အဖြစ်အမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်ကြမ်း RAD140 (Testolone) အမှုန့်သုံးစွဲမှု
RAD140 / Testolone ၏အကြံပြုဆေးညွှန်းတစ်နေ့လျှင် 20-30mgs ထံမှကွဲပြားခြားနားလျက်, အကောင်းဆုံးသံသရာကြာချိန် 12-14weeks ဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်ကြမ်း Testolone အမှုန့်အပေါ်သတိပေး
RAD140 ၏အများဆုံးဆွဲဆောင်ရှုထောင့်တစ်ခုမှာ, နှင့်အထွေထွေအတွင်း SARMS အပေါငျးတို့သ, မူးယစ်ဆေးဝါးတိုးမြှင့်အလုံခြုံဆုံးစွမ်းဆောင်မှု (PED) ၏အချို့သောဒီရက်ကသူတို့ကိုအောင်, ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကုန်ကြမ်း RAD140 အမှုန့်နောက်ထပ်ညွှန်ကြားချက်
ယုတ္တိနည်း, testolone ဟိုအန်ဒရိုဂျင်စတီရွိုက်နှင့်အတူတွေ့မြင်ထင်ရှားတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏ကုန်ကျစရိတ်မရှိဘဲတစ်ဦးအားကစားသမားမှမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အကျိုးခံစားခွင့် renden နိုင်ပါတယ်။ Parcicularly, testolone အကြီးအကျယ်ကြွက်သားထုထည်နှင့်ခွန်အားတိုးပွါးပါလိမ့်မယ်။ အကျိုးဆက် RAD140 ကမဆိုအပိုဆောင်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘဲထိုအရညျအသှေးအပေါငျးတို့သပေးတော်မူမည်ဘယ်မှာသံသရာမဆိုမျိုး, ရန်ကြီးမြတ်ထို့အပြင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ကုန်ကြမ်း Testolone အမှုန့် (CAS 1182367-47-0)
ကုန်ကြမ်း RAD140 အမှုန့်စျေးကွက်
RAD140 အမှုန့် (CAS 1182367-47-0) ဝယ်ဖို့ကဘယ်လို; AASraw ထံမှ Testolone အမှုန့်ကိုဝယ်
RAD140 Powder ချက်ပြုတ်နည်း:
RAD140 အမှုန့်အွန်လိုင်းကိုဝယ်: သင်သိသင့် 8 အချက်အလက်များ !!!
ယ်ယူရန် RAD140 (Testolone) အမှုန့်: RAD140 အဘို့အဘယ်သို့သုံးထားသလဲ?
ကာယဗလများအတွက် Testolone အမှုန့်ကိုဝယ်: RAD140 ၏သက်ရောက်မှုကိုသင်သိသင့်!
Ostarine (MK2866) အမှုန့်
AC အ 262356 အမှုန့်
Drospirenone အမှုန့် (67392-87-4)